မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု: Samsung Galaxy S8 နှင့် LG G6 | Androidsis
YouTube channel အကြောင်းတစ်ခါမှမကြားဖူးဘူး XEETECHCARE၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းအမျိုးမျိုးအကြားတွင်အမြန်နှုန်းစစ်ဆေးမှုအတွက်လူသိအများဆုံးချန်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုအပြင်, ဒီ youtuber လည်းလုပ်ဆောင်တယ် စမ်းသပ်မှုများ, ရေစိုခံစမ်းသပ်မှုများနှင့်အခြားအေးမြသောအရာတို့ကို drop.
မြင်ကြပြီးနောက် Galaxy S8 သည် iPhone7ကို crash test များနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည် TechRax channel မှတစ်ဆင့် LG G6 ကိုရင်ဆိုင်ရန်ယခုအလှည့်ရောက်နေပြီဖြစ်သော်လည်းယခုအချိန်သည်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုသာဖြစ်သည်။
ဒီမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုမှာ youtuber ကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့တယ် Galaxy S8 နှင့်aLG က G6 တူညီသော Wi-Fi ကွန်ယက်သို့ချိတ်ဆက်ပါ။ မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုစတင်သောအခါ S8 သည်ပိုမိုမြန်ဆန်ကြောင်းအချို့သောအချိန်များတွင် LG G6 ကအားသာချက်ယူသည်။
စမ်းသပ်မှုများစွာတစ်လျှောက်လုံး, Galaxy S8 က LG ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ထက်ပိုမြန်သည်, S8 ၌ရှိကြောင်းသတိရရပေမည် Snapdragon 835 ပရိုဆက်ဆာ (သို့မဟုတ် Exynos 8895) သည် G6 တွင်ပါဝင်သည် Snapdragon 821.
Settings menu ကိုဖွင့်သောအခါ LG G6 သည် Galaxy S8 ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သောအခြေအနေတစ်ခုမှာ applications များ (Tinder, Snapchat, Instagram, Twitter, etc) သည် S8 တွင်အစောပိုင်းတွင်ဖွင့်ထားသကဲ့သို့ call function ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
အခန်းတွေဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ စမတ်ဖုန်းနှစ်ခုလုံးမှာ၊ မြန်နှုန်းလက်တွေ့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်LG G6 browser သည် S8 ၏ဖြစ်ရပ်ထက် Wikipedia ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာဖွင့်လှစ်နေစဉ်။
Samsung Galaxy S8 သည်ဤစမ်းသပ်မှုတွင်ပိုမိုမြန်ဆန်သော်လည်း LG G6 သည်အလွန်နီးကပ်စွာရပ်တည်နေသည်မှာသေချာသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ပရိုဆက်ဆာသည်မျိုးဆက်ဟောင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်ကုမ္ပဏီ၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုအမြင့်ဆုံးအထိမြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » အမြန်နှုန်း: Samsung Galaxy S8 နှင့် LG G6
Android Wear အတွက်အကောင်းဆုံးနာရီများ